११८ जना नेपालीहरु बस्ने क्याम्पमा भि’षण ह’मला, २ नेपालीहरु पनि मा’रिए – khabartime
Wednesday October 16, 2019 |
११८ जना नेपालीहरु बस्ने क्याम्पमा भि’षण ह’मला, २ नेपालीहरु पनि मा’रिए
१८ भाद्र २०७६, बुधबार १०:३० 23 पटक हेरिएको
अ फगानिस्तानमा सरकारसँग द्व न्द्व जारी राखेका ता’लिबान ल’डाकू समूह र वासिङ्टनबीच शान्ति सम्झौता अन्तिम चरणमा पुग्न लागेको अस्थावमा अ’फगानिस्तानको राजधानीमा पुनः भी षण वि स्फोट भएको छ । काबुलको आवासिय क्षेत्रमा भएको यस परी कम्तीमा १६ सर्वसाधारण मा’रिएका छन् । यस स्फोटमा परी अन्य १ सय १७ व्यक्ति घा इते भएका प्रहरी स्रोतले जनाएको छ । सोमबार ब’म वि स्फोट भएको यस समयमा अमेरिकी विशेष दूत जाल्मे खलीलजाद अ’फगानिस्तानको राजधानीमा प्रस्तावित सम्झौताको बारेमा छलफल गर्न आउनु भएको थियो ।
उहाँ अ’फगानिस्तानमा ता लिबान ल डाकू र अमेरिकाबीच शान्ति सम्भाmैता हुन लागेको यस अन्तिम समयमा यहाँ रहेका अमेरिकी सेना फर्काउने विषयमा सम्झौताको लागि आउनु भएको थियो । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नसरत रहिमीकाअनुसार वि ष्फोटक प’दार्थले भरिएको एउटा ट्याक्टर ग्री’न भि’लेज नामक अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संगठनलगायत विदेशीहरु बस्ने आवायि भवनहरु पनि रहेको कमाण्डमा पर्खालमा सो वि स्फोट गराइएको थियो ।
यस परी १६ सर्वसाधारणको मृ त्यु हुनेको साथै अन्य १ सय १९ जना घा इते भएका रहिमीले पुष्टि गर्नु भएको छ । मृ त्यु हुनेमा २ जना नेपाली पनि परेका छन् । पाकिस्तानको इस्लामावादस्थित नेपाली दूतावासले समेत आ त्मघा ती ह मलामा २ नेपालीको मृ त्यु भएको बताएको छ । नि’धन हुनेमा क्यामको सुरक्षाको जिम्मा पाएको ‘गा’र्दा वल्र्ड’ नामक क्यानेडियन सुरक्षा कम्पनीमा कार्यरत थिए । घा इते भने कुनै पनि नेपाली नरहेको दुतावासले जनाएको छ । उक्त क्याममा ११८ जना नेपालीहरु त्यहाँ सुरक्षा गार्डका रुपमा तै नाथ थिए ।
केही दिनयता ता लिबान ल डाकूले गरेको यो तेस्रो ठूलो आ क्र मण हो । सप्ताहन्तमा अ फगानिस्तानको उत्तर भागमा पर्ने दुई प्रमुख शहरहरूमा भएका भि षण आ क्रम णहरुमा दर्जनौं सुर क्षाबल र नागरिकहरूलाई मा रिनुको साथै घा इते भएका छन् । अ ल का यदा वि द्रोही समूहले सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ मा न्युयोर्क शहरमा अवस्थित ट्वीन टावर आ क्रम णपछि अमेरिकी सेनाले अ फगानिस्तानमा आ क्रमण गरेको थियो । उक्त समयमा एक लाख ३० हजार भन्दा बढी अमेरिकाको नेतृत्वमा नेटो सेना अफगानिस्तानमा प्रवेश गरेका थिए ।
बलात्कार आरोपः जसले सिध्यायो
महराको राजिनामापछि बला’त्कृत भनिएकि
सभामुख प्रकरणः लिखित उजुरी
अन्ततः पदबाट यसरी राजिनामा
सभामुखको केसमाथि यसरी आैंला
सभामुख महरालाई बला-त्कारको आरोप
कुछ कुछ होता है को रिमेक बन्ने ! करणले छाने यी कलाकार
बलात्कार आरोपः जसले सिध्यायो महराको चार दशक लामाे राजनीतिक इतिहास
महराको राजिनामापछि बला’त्कृत भनिएकि महिलाको बयान फेरियो!
सभामुख प्रकरणः लिखित उजुरी आएकै छैन, पीडित बेपत्ता, कसरी अघि बढ्छ अनुसन्धान ?
अन्ततः पदबाट यसरी राजिनामा दिए महराले!
सभामुखको केसमाथि यसरी आैंला उठाउँदै भनेः रफादफा हुनुहुँदैन
कोहि भन्दा कम छैनन् नेपालकि छोरीहरू पनि!
नायिका बेनिशा हमालको सुन्दरता तस्विरहरूमा यसरी छल्कियो… हेर्नुहोस्
सङ्कटमा पर्दै पानीघट्ट बनाउने व्यवसाय